Nezvedu - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
CFM - ZUVA RIMWE ROKUTUMIRA
Inovandudza bhizinesi kune fekitori modhi inoita yakananga-kune-fekitori kudhinda inogoneka.
Kurongeka kuri nyore uye kuri nyore pamhepo kunochengetedza nguva yako nemari pakutenga.
Kubva 2011, CFM yanga ichitarisa pakushambadzira kwemachira ekudhinda kweanenge makore gumi.
CFM ndiyo yekutanga Internet-yakavakirwa sevhisi yekushambadzira machira ekudhinda muChina, ichitungamira kugadzira online online ordering system, kumisikidza musangano wedigital uye kuwana "kushanda nevanhu vashoma asi yakakwira yekugona kugona".
Kuburikidza nehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, CFM inoshandura nzira yechinyakare yekuisa maodha, ichiona maodha epamhepo achienderera nehurongwa pasina nguva, pasina hukama hwepakati kana kutaurirana kwakanyanya. Yedu B2F (bhizinesi kuFekitori) online yekuodha modhi inoita kuti iwe unakirwe nekutenga kuri nyore, kuri nyore uye kunoshanda.
CFM yakazvipira kupa mhando yekuratidzira zvigadzirwa, inokurumidza kutungamira nguva uye isina kuchengetedzwa vatengi. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira matende edenga, mabutiro etafura, mhete dzeminhenga, machira ekuratidzira, uye ese marudzi etsika mireza nemabhena.
Iine angangoita makore gumi echiitiko muindasitiri yekuratidzira indasitiri, CFM inokupa iwe nyanzvi machira mazano, ekudhinda nzira sarudzo, uye chiitiko kuratidza mhinduro.
Nei uchisarudza CFM?
Kana musi wechiitiko wakakodzera, urikuomerwa here kubata nguva yekupedzisira nekuda kwenguva refu yekutungamira yezvigadzirwa zvako zvekuratidzira?
Paunogadzira zvemumba kana kutenga kubva kune mutengesi wemuno, uri kunetsekana nemutengo wakakwira nekuda kwemutengo wakakura webasa?
Paunotenga kubva kune wepakati kana kambani yekutengesa, unoona zvakaoma kuwana mutengo unokwikwidza uye kuona kukosha kwechigadzirwa uye kutungamira nguva?
CFM inogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko ese kamwechete.
24HR Rush Yekutungamira Nguva Inowanikwa
Yemhando Zvigadzirwa, Makwikwi Mitengo
Tungamira-ku-Fekitori Kudhinda Service
Isina kuchengetedzwa Kwevatengi Sevhisi
Yedu 24hr pamhepo kutora uye kuodha system inoita kuti iwe uwane makotesheni uye nzvimbo yekuodha chero nguva, hapana chikonzero chekushushikana nezve mutsauko wenguva, semuenzaniso, pane gumi nemaviri kusvika gumi nemaawa maawa musiyano wenguva pakati peChina neUS. Uye yedu 24Hr basa rekudhirowa uye 24Hr yekudhinda sevhisi ndiyo inovimbisa yedu 24Hr kukurumidza kutungamira nguva.
CFM inoderedza mutengo wayo kuburikidza nehunyanzvi hwekuvandudza, izvo zvinoita kuti tikwanise kukupa iwe kukwikwidza mitengo pasina kupa chibayiro chehunhu. Nekuunza yakagadziriswa dhijitari manejimendi sisitimu, musangano wedu unogona kushanda zvakanyanya, kunyangwe nevanhu vashoma, isu tinogona kugona kuwana yakakwira yekugona kugona. Paunenge uchitenga kubva kuCFM, unogona kugara uchiwana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kunyangwe uine bhajeti shoma.
Sezvo yedu yekuraira sisitimu yakabatana zvine mutsindo neyedu yekugadzira system, kana iwe ukatenga pamhepo, zvinoreva kuti urikutaura zvakananga nemusangano wedu uye hapana epakati ma link anobatanidzwa. Zvichakadaro, epamhepo mifananidzo mvumo uye yepamhepo odhiyo mamiriro ekuteedzera zvinogoneka. Yedu yakananga-kune-fekitori yekudhinda sevhisi haigone chete kuti iite basa rako zvinobudirira asiwo zvakare kukubatsira iwe chengetedza kutaurirana mutengo.
Kupfuura izvo, CFM inopa akateedzana eakakosha-akawedzera masevhisi kune vatengi, kubva kuUSA matura kune kushambadzira tsigiro, uye kubva kuVIP zvigadzirwa zvekushomeka kune boka-kutenga mhinduro yehardware. CFM haina kungo tarisa kupurinda yakanakisa yekuratidza zvigadzirwa iwe asi zvakare inoedza kugadzira mamwe maitiro ebhizinesi rako.